Khabar Break - विचार
Monday 23rd of October 2017, 7:13:00 pm
म पनि भर्जिन पुरुष खोजौँ त ?
Monday 16th of October 2017, 08:50 PM
-सविता सापकोटा सन्तान जन्मने बितिकै बाबा र आमाको मनमा आशाका टुसाहरु पलाउन थाल्छन् । छोरीभन्दा पनि छोरालाई बढि प्राथमिकता दिने हाम्रो समाजमा , बाबु तिमी ठूलो भएपछि पढेर डाक्टर बन्नुपर्छ भनेर सिकाइन्छ । सन्तानले कस्तो पढ्छ, उसको रुचि के हुन्छ भन्ने कुराको मध्यनजर धेरै अभिभावकले गर्दैनन् । काचो माटोलाई जस्तो आकार दियो त्यस्तै बन्छ । बिचरा बालबालिका पनि त्यस्तै हुन । के थाहा उनीहरुलाई डाक्टर पढन कति कठिन छ । बनेपछि जागिर खान कति कठिन छ । बिशेषगरी धनी...
आखिर दोष कस्को ?
Thursday 14th of September 2017, 04:46 PM
सम्झना रिजाल : नेपालमा अहिले बैदेशिक रोजगारिकोलागि विदेश जानेहरुको सङख्या निकै बढ्दो क्रममा छ । जसका कारण देशले दक्ष जनशक्ती मात्र गुमाइरहेको छैन, धेरै दम्पतिहरुको बिचमा दरार पनि उत्पन्न गरेको छ । सुनौलो भविष्यको सपना बोकेर परदेशिएकाहरु फर्किदा घर नै तहस नहस भएको हामीले आफ्नै गाँउ ठाँउमा देखिरहेका छौ । मकवानपुरमा सम्बन्ध बिच्छेदका मुद्धाहरु बढ्न थालेका छन । धेरै जसो समस्याहरु बैदेशिक राजगारीका कारण भैरहेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय मकवानपुरको...
रोमान्सको राजनीतिमा रमितेहरुको रमझम
Wednesday 13th of September 2017, 05:04 PM
–रामकुमार एलन: स्टेफन किङले भनेका छन, ‘फ्रेन्च यस्तो भाषा हो, यसले फोहोरलाई पनि रोमान्समा परिणत गर्छ ।’ सायद स्टेफनले अनुमान गरेनन्, ‘नेपालमा ह्वात्तै लोकतन्त्रलाई जोकतन्त्र मान्नेहरुको बहुमत हुनेछ, भ्रष्टहरु पुजिनेछन् । व्यवस्थाविरोधीहरु अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा आरक्षित हुनेछन् अनि जेल हाल्नु पर्ने नेतालाई मन्त्री हुने रहरको घाँस देखाइदिएपछि ऊ पार्टी फुटाएर पनि बुर्लुक्क उफ्रँदै आउनेछ, यिनलाई प्रधानमन्त्री दिने...
सहकारी पिडितको आवाज
Friday 1st of September 2017, 06:43 PM
दुःखमा पनि खुसीका लागी भनी सोचेका ती हरेक पसिना अहिले बिलाएका छन् लुटिएका छन् । हो म आज ती ओरेन्टलका पिडितका कुरा गर्दैछु । ती पिडितका पिडाहरुले यती बिझ्न थाल्छन् कि मन भित्रभित्रै जलन हुन्छ र ती शब्दमा निकाल्न थाल्छु, कापी र कलमले साथ दिन्छन् । नेपाल सरकारको सहकारी ऐन २०४८ अन्तर्गत स्वीकृत प्राप्त २३६ नं. मा दर्ता भइ इजाजत पत्र प्राप्त गरेर मैतीदेवी काठमाडौंमा प्रधान कार्यालय खोलि देशको विभिन्न जिल्लामा १३ वटा शाखा संचालन गरेको ओरेन्टलको अपरेटिभ...
Wednesday 30th of August 2017, 09:59 AM
यो समाजमा म जुठो हो भने मेरा जुठा शरीर भोग गर्ने पुरुष कसरी चोखो हुनसक्छ ? म ‘वेश्या’ भएँ भने मलाइ वेश्या बनाउने यो पुरुषको उपनाम के? उनको दैनिकी कुनै सम्पन्न परिवारको भन्दा कम थिएन। स्कुटरमा उनी यसरी सजिएर हिँडेको देखिन्थिन्, मानौं कुनै फिल्मको सुटिङमा जादै छिन् । सानैमा विहे गरेकी उनले एउटी छोरीलाई होस्टेलमा राखेकी हुनाले काठमाडौंमा डेरामा एक्लै बस्न थालेको पनि दुईचार वर्ष नै भइसकेको थियो। उनका बारेमा छिमेकीको आ–आफ्नो अनुमान थियो। कोही...
‘एउटी श्रीमतिको इच्छा पनि पूरा गर्न नसक्ने सरकारी जागिरे !’
Wednesday 30th of August 2017, 09:37 AM
समाजमा महिला मात्रै दुखी छैनन् । महिलाका बारेमा लेखिरहँदा केही साथीहरुले सुझाव दिए की, ‘पुरुषका पनि आफ्नै दुख छन् । उनीहरुका बारेमा पनि लेख ।’ महिला बढी पीडित त छन् नै, पुरुषलाई पनि यो सहरिया दुनियाले खुसी बन्न दिएको छैन । महंगी र अनियन्त्रित व्यवस्थाकै कारण सहरका थुप्रै पुरुषको पीडा पनि यस्तै त छ : समयले नेटो काट्यो, सबै चिज फेरिए । देशमा संविधान बन्यो । सरकार परिवर्तनको परम्परा चलिरह्यो । तर सरकारी कर्मचारीहरुको तलब कछुवाको गति झैँ भयो । गाउँको घर...
तिम्रो विर्यको मुल्य कति ?
Friday 11th of August 2017, 08:58 AM
– सिर्जना बस्नेत त्यो दिन अर्थात् मैले एक्काइस वर्ष पहिलाको रहस्य खुलाएको दिन । मेरो स्मृतिमा ताजै छ २०७२ असारको पहिलो त्यो हप्ता । बिस्तारै धर्ती भाँसिए जस्तो महसुस भएको थियो । अरुको लागि दिन सधै जस्तो सामान्य नै थियो । तर मेरो लागि फरक । दश बज्न दश मिनेट नै बाँकी थियो । म कोठाको ढोकामा चाबी लगाउँदै थिएँ । मोवाइलको घण्टी बज्यो । ब्यागबाट मोबाइल निकालेर मोबाइलको स्क्रिनमा आँखा दौडाएँ । मोबाइलमा सेभ रहेको नम्बरबाट फोन आएको रहेछ । त्यो नम्वरमा...
‘त्यसैले त अस्तिको दिन घरबाट भागेर हिँडे’
Friday 21st of July 2017, 11:31 AM
ज्योति देवकोटा (घर छोडेर भागेको दिन ४) ‘नेपालगन्ज, नेपालगन्ज…’ तिखो हर्नसँगै कालो धुँवाको मुश्लो छोड्दै आएको बुढो गाडी म सुतिरहेको ठेलाको छेउमा आएर घचक्क रोकियो। धुलाम्मे र हिलाम्मे मिनि बस साह्रै थोत्रो थियो। भारत जान सुर्खेत झरेर पिपल चौतारामा सुतेका जुम्लीहरूसँग मनलागी भाडा असुल्ने यस्तै थोत्रा बसका कण्डक्टरहरु हुन्थ्ये। यही थोत्रो बसभित्र बजीरहेको थियो ‘दिदी तेरा देवर दिवाना…’ जुन गीतले म भागेर सुर्खेत पुगेको अर्को दिनको...
कर्मचारीलाई ११ महिना हाइहाइ, अन्तिममा टाउको दुखाई
Tuesday 11th of July 2017, 06:28 PM
सम्झना रिजाल असार मसान्त नजिकिदै छ । यति बेला बिभिन्न बित्तीय संस्थाका साथै सरकारी कार्यालयका कर्मचारीहरु पनि हिसाब मीलाउन र भैरहेका कार्यहरुको निरिक्षण गर्न ब्यस्त देखिन्छन । अहिले जहाँ हेरे पनि विकास निमार्णको काम यति तिब्र गतिमा भैरहेको छ की यहि गतिमा वर्षदिनभर विकास हुने हो भने अवको छोटो समयमा नै नेपाल विकसित देश हुनेछ । यो ब्यस्तता र विकास निर्माणका काम भने हुन थालेको धेरै समय भएको छैन । असार महिना लागेपछि मात्रै हो सुरु भएको र धेरै दिन...